An’ny TAXIBE indray izao ny manaraka… | GAZETY_ADALADALA
An’ny TAXIBE indray izao ny manaraka…
Nisy antso avo nataoko ho an’ny C.U.A teto ny amin’ny tsy tokony hanadiovana ny faritry Behoririka mandritry ny iray andro sy iray alina mba hijerena raha ho sahy hiverina hamelatra entana eo ambonin’ny fako navelany ny omalin’iny ireo mpivarotra mahay vava ireo. Ary dia nisy moa ny saika hijapy an’iny indray tamin-dry zareo mpanao politika. Ny taim-bavan’ilay ramatoa iray mba niseho tele izay aza moa dia manao hoe
* ny madinika ihany no ampiadiana amin’ny madinika (mantsy azy ireo sy ny mpaisan’ny CUA asaina manala azy).
* avelao ny olona hivarotra fa be izao ny tsy an’asa, ary maty antoka izahay raha miala ety, fa tsy hitan’ny olona sy tsy tongan’ny olona ny any Namontana
* ety amin’ny arabe izahay mba mihinana ny zanaka kelinay
Anton-dresaka eto moa ny tsy fikorianan’ny fifamoivoizana araka ny tokony ho izy. F’angaha moa rehefa hitady vola dia tsy maintsy eny anatin’ny 1/3-‘ny arabe, na manao izay hifanandrinana amin’ny be sy ny maro vao mahita an’izany e! Io toe-tsaina io ihany. Dia faly ery koa ireo mpanao politika tsy vanona sasany mikopakopaka ilay afokely entin’ireo mpivarotra amin’izao faran’ny taona izao.
Ka raha vita izay (na ny marina kokoa, nanomboka) ny an’ny mpivarotra amoron-dalana, andro vitsy monja taorian’iny antso avo iny, dia mba misy antso avo iray indray ity alefako, sao mba azo tanterahana koa.
Isan’ny miteraka fitohanana eny an-dalambe eny ihany koa ny tsy fanajan’ireo mpamily TAXIBE ny mpampiasa làlana toa azy. Fa na ho lany eo aza ny vatoaratry ny fiaranao, na hipotsaka eo aza ny masona, tsy hiontsona eo amin’ny toerana nitokonany ingahy mpamily raha tsy sitra-pony. Sao mantsy maty ‘tour’ raha voasongon’ny ao aoriana.
Jereo anie ity tetsy Andravoahangy ambony tsy lavitry ny ‘EPI D’OR’ taloha ity e. Andro Alahady no nisehoan’izao tranga izao. TAXIBE 160 , MAZDA , laharana 6190 TS.
Ny antso ataoko dia izao, efa maro ankehitriny ny polisy monisipaly mivoaka eraky ny arabe, mandamina ny fifamoivoizana. Saiky vehivavy no ankamaroan’ny hitan’ny masoko. Asa na izany no tsy hananan’ireo mpamily hena-maso amin’izy ireny, fa MBA MIENJANA KELY AMIN’NY FAMPIHARANA NY LALANAN’NY FIFAMOIVOIZANA E.
Tsy rahavavin-dreniny daholo kosa angamba ianareo ireny, ka hoe hitsitsitsitsy azy ireo foana. Ary izany koa no anton’ny andoavako hetra (izaho aloha no fantatro, fa tsy haiko izay hafa mandoa na tsy mandoa any, satria dia nisy tokoa ny nanao fanentanana mba tsy handoavana izay hetra izay). Ny karamanareo raisinareo ihany isaky ny mifarana ny volana, koa aoka ho mendrika izay koa ny asa atao, fa manjary mifanabe vatan’orona isika.
Izao izao dia miverina mitohana indray ny etsy Behoririka, nefa ny CUA niteny fa tsy maintsy hanadio sy hanala ireo mpivarotra ireo isan’andro. K’aiza ihany e?
Filed under: fiaraha-monina, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: CUA, mpivarotra amoron-dàlana, taxibe |
« Eson’ ‘Lita (Insolite) Tifitra fiaran’i RAJOELINA, Sinema… »